Iyo iPad ichiri Mambo wemapiritsi, kunyangwe kushomeka kwemasheya nekuda kwekushomeka kwemachipisi | Nhau dze iPhone
Iyo iPad ichiri Mambo wemapiritsi, kunyangwe kushomeka kwemasheya nekuda kwekushomeka kwemachipisi
El iPad Hapana mubvunzo kuti imwe yeApple's nyeredzi zvishandiso. IPhone ine vakwikwidzi vakawanda uye inofanirwa kurwa pakati pemhando dzakasiyana siyana dzenharembozha, nguva imwe neimwe ine zvirinani, uye mitengo inonzwisisika. Pane kudaro, mumusika wehwendefa, iPad ndiye Mambo.
Ndidzo nhamba dzinoburitswa gore rega rega Canalys netsvagiridzo yako yemusika. Muna 2021, Apple yakatengesa angangoita mamirioni makumi maviri iPads. Uye izvo zvaisave nestock yakakwana nekuda kweinozivikanwa chip kushomeka dambudziko….
Apple haiwanzo kupa data pakutengesa kwemidziyo yayo, asi nerombo rakanaka kune makambani akaita seCanalys, anoita estimates (yakanyatsogadziriswa kune chokwadi), uye nekudaro tinogona kuziva mafambiro ari kuita musika kumhuri yega yega yemidziyo.
Uye chokwadi ndechekuti pakupedzisira kwake report, inoratidza kuti iPad ichiri, rimwezve gore, piritsi rinotengeswa zvakanyanya muUS. Inotsanangura kuti kutengesa muNorth America kwemakomputa uye mahwendefa kwakakura ne1% mu2021 zvichienzaniswa negore rapfuura. Huwandu hwemayunitsi emamiriyoni zana nemakumi matatu neshanu hwakatengeswa. Nhau dzakanaka tichifunga nezvekushaikwa kwechigadzirwa chekutengesa nekuda kwedambudziko rekushomeka kwechip.
Iyo iPad yaitonga piritsi yemusika kugovaniswa neinenge 20 mamiriyoni zvemayuniti akatengeswa. Kubudirira chaiko kana tikafunga kuti nguva dzekutumira maodha dzakanonoka nemavhiki mapfumbamwe. Kazhinji, inomiririra kudonha kwe17% kana ichienzaniswa ne2020. Chikamu chayo chemusika chakabva kubva ku44,6% muchikamu chechina che2020 kusvika ku40,2% muchikamu chechina che2021.
Kana iri musika wemakombuta, HP ndiyo yaive inotungamira mhando, ine chikamu che30% chemusika. Asi Apple yakaramba iri mumhando shanu dzepamusoro dzinotengeswa zvakanyanya, budiriro yeMacs.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Iyo iPad ichiri Mambo wemapiritsi, kunyangwe kushomeka kwemasheya nekuda kwekushomeka kwemachipisi
Apple inosuma anti-kutevera shanduko yeAirTags mune itsva iOS 15.4 beta